Baolina kitra sy valanaretina :: Mety hiato ireo fifaninanana eoropeana • AoRaha
Baolina kitra sy valanaretina Mety hiato ireo fifaninanana eoropeana
Mampikorontana fandaharam-potoana ara-pa­na­tan­jahantena maro ny fisian’ilay valanaretina “Corona­virus”. Taorian’ireo lalao voatery nolalaovina tsy nisy mpijery dia mety hiafara amin’ny fiatoana tanteraka ireo fifaninanana kaontinantaly eoropeana, “UEFA Champions League” sy ny “Europa League”. Vao lalao efatra amin’ireo valo manamarika ny dingan’ny am­pahavalon-dalana anefa no vita.
Nampita hafatra tao amin’ ny pejy ofisialiny ny Kaonfe­derasiona eoropeana, omaly tolakandro, ny amin’ny hisian’ ny fivoriana maika hatao mia­raka amin’ny solontenan’ireo firenena dimy amby dimampolo mikambana ao aminy, amin’ny talata ho avy izao. “Hodinihina amin’izany ireo fepetra horaisina amin’ireo fifaninanana eoropeana roa miampy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa na ny Euro 2020”, araka ny fanambaràna nataon’izy ireo. Mety hiitatra hatrany amin’ny fifani­nanam-pirenena mihitsy aza izany, araka ny voalazan’ity rafitra ity.
Nisongadina tamin’ireo lalao efatra vita ny fihintsa­nan’ireo klioba anglisy roa niatrika ny lalao famaranana tamin’ny taon-dasa (Liverpool sy Tottenham). Taorian’ny nanilihan’ny RB Leipzig ny ekipan’i José Mourinho, mpanazatra ny Tottenham, dia lavon’ny Atletico Madrid tamin’ny tambatr’isa 4 noho 2 (1 – 0, 3 – 2) ny Liverpool, tompondakan’i Eoropa farany misy an-dry Sadio Mané sy Mohamed Salah, afak’omaly. Ahiana ny mety tsy hisian’ny solontena anglisy intsony amin’ny dingana manaraka satria tataovam-pihintsanana ny klioba iray mbola hiatrika ny lalao miverina.
Montsana tamin’ny isa 3 noho 0, tao amin’ny taniny, ny Chelsea mialoha ny hiatre­hana ny lalao miverina any Alemana manoloana ny Bayern Munich, amin’ny foto­ana mbola tsy voafetra noho ny fampihemorana an’ireo lalao. Soa fa nandresy tamin’ ny isa 2 noho 1, tany amin’ny Etihad Stadium (Angletera), ny Manchester City tamin’ny lalao mandroso sady handray ny lalao miverina ao an-taniny.
Hatramin’ny taona 2016, niatrehan’izy ireo ny dingan’ ny ampahavalon-dalana, dia sambany indray vao tafita eo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana ny Paris Saint-Gérmain. Resin’ny Dortmund tamin’ny isa 2 noho 1 ity farany tamin’ ny lalao mandroso. Vitan’izy ireo anefa ny nampi­tsimba­dika ny vokatra tamin’ny lalao mi­ve­rina, tao amin’ny kianja Parc des Princes (Frantsa) tsy misy mpijery, afak’omaly. Fandre­sena tamin’ny tambatr’isa 3 noho 2 (1 – 2, 2 – 0) ny ekipan’ ny Dortmund tamin’ny fiafa­ran’ny lalao mive­rina.
Taekwondo ITF – amboaran’i Afrika :: Kandidà hampiantrano fifaninanana kaontinantaly i Madagasikara
Tsiaron’ny tolom-panafahana :: Halefa etsy Antsahavola ny horonantsary “Ilo tsy very”